Yangu Apple Tarisa Froze! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Apple Tarisa
yangu iphone 6 inoramba ichirasa sevhisi
unotenderera sei ipad screen
ndotanga sei wachi yangu yeapuro
iphone yakaswededzwa mukati uye haizoswededze kunze
zvishoma zvinorwadza kuboora nzeve nenzira
Yangu Apple Tarisa Froze! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako Apple Watch yakapererwa uye hauna chokwadi nei. Iwe waedza kudzvanya bhatani reSide, iyo Dhijitari Crown, uye iyo kuratidzwa, asi hapana chiri kuitika! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura zvaunofanira kuita kana yako Apple Watch yagwamba nechando uye ikuratidze maitiro ekugadzirisa dambudziko zvachose .
Zvakaoma Dzorerazve Yako Apple Watch
Zvakaoma kumisazve yako yakaoma yechando Apple Watch ichaimanikidza kudzima uye nekukasira kumashure, izvo zvichadaro kwechinguva gadzirisa dambudziko. Kuti ugadzirise zvakaoma yako Apple Watch, panguva imwe chete dzvanya uye ubatisise iyo Dhijitari Crown neSide bhatani kusvikira iyo Apple logo iratidzike pachiratidziri . Kazhinji unofanirwa kubata mabhatani ese masekondi angangoita gumi, asi usashamisike kana ukapedzisira wabata mabhatani ese pasi kwemasekondi gumi nemashanu!
Ini ndoda kusimbisa izvo uku kugadzirisa kwechinguva nekuti kazhinji yenguva apo yako Apple Watch inotonhora, pane yakadzika software software inokonzeresa dambudziko.
Kana iwe uchingoita yakaoma reset paApple Watch yako, dambudziko rinotonhora rinogona kudzoka pakupedzisira. Matanho pazasi achakubatsira iwe kutora mamwe matanho ekudzivirira yako Apple Watch kubva kuchitonhodza zvakare!
Chimwe chikonzero nei yako Apple Watch ingaramba ichitonhodza ndeyekuti iri kumhanyisa yechinyakare vhezheni yeOSOS, software inodzora zvese zviri paApple Watch yako.
Kuti utarise wongororo yeWOSOS, vhura iyo Watch app pane yako iPhone uye tora pane My Watch tebhu pazasi pechiratidziro. Wobva wadzvanya General -> Software Kwidziridza . Kana wachi yeOSOS iripo, tinya Dhawunirodha uye gadza .
Ongorora: Usati wagadzirisa watchOS, ita shuwa kuti yako iPhone yakabatana neWi-Fi uye kuti yako Apple Watch inogona kunge ichichaja kana ine inopfuura 50% bhatiri hupenyu.
Iko Kune Chaiko Chaicho App Kugadzira Yako Apple Watch Kufreeze?
Kana yako Apple Watch ichidziya kana kuomarara paunoshandisa imwe app, panogona kunge paine nyaya neiyo app kwete yako Apple Watch. Kana iri Anwendung iwe yaunogona kurarama usina, ungangoda kufunga nezve kuidzima.
Kuti udzime app pane yako Apple Watch, tinya iyo Dhijitari Korona kuti uone ese ako maapp. Kana usati watoita, ita shuwa kuti urikuona maapplication ako mukati Grid Tarisa pane Rondedzero Kuona . Kana maapplication ako achiri muList View, pinda uye bata pane kuratidzwa kweApple Watch yako, wobva wadzvanya Grid View .
Tevere, zvinyoro-nyoro uye bata app icon kusvikira ese maapplication atanga kuzunza. Kuti ubvise Anwendung, tinya pane diki X kuruboshwe rwekuruboshwe-ruoko rweapp icon.
Bvisa Zvese Zvemukati Uye Zvirongwa Pane Yako Apple Tarisa
Kana yako Apple Watch anochengeta chando, panogona kunge paine chiri kukonzera software kukonzeresa dambudziko. Tinogona kubvisa iyi ingangoitika nyaya nekubvisa zvese zvirimo uye marongero pane yako Apple Watch.
Paunodzima zvese zvirimo uye nekumisikidza yako Apple Watch, zvese zviri muZvirongwa zveApple paApple yako Watch zvichagadziriswa kuzvinhu zvemufekitori nezviri mukati (mumhanzi, tarisa Zviso, nezvimwewo) zvichabviswa zvachose.
Uyezve, uchafanirwa kubatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone zvakare. Funga nezvazvo sekutora yako Apple Watch kubva mubhokisi kekutanga nguva.
Kuti ubvise zvese zvirimo uye marongero, vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch uye tinya General -> Seta -> Bvisa Zvese Zvemukati uye Zvirongwa . Pinda yako passcode, wobva wadzima Erase Zvese Zvirimo uye Zvirongwa kana yambiro yekusimbisa ikabuda pachiratidziro. Yako Apple Watch ichabvisa zvese zvirimo uye marongero, wozotangazve.
Kugadzirisa Zvingangoita Hardware Nyaya
Kana yako Apple Watch ikaramba ichitonhora kunyangwe mushure mekunge washanda kuburikidza nematanho aya, panogona kunge paine dambudziko rehardware rinokonzera dambudziko. Kana iwe uchangobva kudonhedza yako Apple Watch, kana kana yakaratidzwa kumvura, zvemukati zvikamu zveApple Watch yako zvinogona kukuvara kana kuputswa.
Kana yako Apple Watch iine Hardware nyaya, tora uiende neako Apple Store woita kuti vatarise pairi. Rangarira ku ronga musangano kutanga kuve nechokwadi kuti hauna kumirira kwakatenderedza masikati ese!
Iyo Cold Haina Kundirambidza Zvakadaro
Yako Apple Watch haisisina chando uye iri kushanda zvakajairika zvakare! Kana iwe uchiziva mumwe munhu ane chando Apple Watch, ita shuwa kuti unogovana ichi chinyorwa navo. Kana iwe uine mimwe mibvunzo nezve yako Apple Watch, vasiye iwo muchikamu chemashoko pazasi.